ဒုက္ခသည်များအတွက်ပြည်သူ့အကျိုးခံစားခွင့် | အဆိုပါ USAHello | USAHello
The goal of public benefits is to provide for your basic needs until you are able to become independent. Here you will find information about the public benefits for refugees you may receive when you arrive in the USA. သင့်အနေဖြင့်အစိုးရ၏ဒုက္ခသည်အေဂျင်စီထံမှအခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထောက်ခံမှုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်, ORR.
Public benefits for refugees are different from the rations you may have received inarefugee camp. Rations inarefugee camp continued as long as you lived inacamp. USA တွင်, သင်သာအချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ငွေပမာဏများအတွက်အများပိုင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုငျ. Once you start working and earning an income for your family, သငျသညျအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်. သို့သော်အများဆုံးဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့တစ်တွေအလုပ်ကောင်းရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဂရုစိုက်နိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ကသူတို့အလွန်ဂုဏ်ယူခံစားမိလို့ပြော.
Public benefits for refugees can be confusing. သငျသညျအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်.
အဆိုပါဒုက္ခသည်ငွေကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (RCA) Program ကိုသင် USA တွင်ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးရှစ်လအတွင်းဒုက္ခသည်များမှပိုက်ဆံ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထောက်ပံ့ပေး. သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သား / တိုက်ခန်းနှင့်လျှပ်စစ်မီးဥပဒေကြမ်းများများအတွက်ငှားကဲ့သို့သင်၏အခြေခံကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ဖို့ပိုက်ဆံသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်က RCA ကန်ထရိုက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့လစဉ် RCA စစ်ဆေးမှုများခံယူရပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ RCA အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, သင်သည်လည်းသင်၏အပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီထံမှကိစ္စတွင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ရှစ်လလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. The first eight months of being in the USA can be very difficult and your case manager can help you. တခါတလေ, when you are learninganew language and adjusting to life in the USA, သငျသညျဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှုလွဲခြင်းသို့မဟုတ်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်အခြို့သောအမှုတို့ကိုပြုရကြမည်. Your case manager can help you adjust to life in the USA. We recommend you attend as many meetings and programs as possible with your caseworker.
The RCA program may also include other things to help you adjust to life in the USA. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာချိန်းအချိန်ဇယားဆွဲပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဘယ်လိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးစွဲဖို့သငျသညျဆုံးမဩဝါဒပေးသင့်အသိုင်းအဝိုင်းရှိအခြားသယံဇာတအရင်းအမြစ်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ.
အဆိုပါ RCA လည်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာလူမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခံရဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့် (RSS ကို) အလုပ်အကိုင်အအကူအညီနှင့်တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရေရှည်ကိစ္စတွင်-အလုပ်အတွက်အစီအစဉ်ကို.
If you arearefugee who has been in the USA for less than eight months, သငျသညျအစိုးရကထံမှအကူအညီအချို့ကိုအမျိုးအစားရရှိမည်. အတော်များများကဒုက္ခသည်များ RCA များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော်လည်းသင်ကလေးတွေနဲ့အတူနေတဲ့မိသားစုရှိပါကသို့မဟုတ်သင်သက်ကြီးရွယ်အိုများဒုက္ခသည်လျှင်, သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေခြင်းငှါ. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသင်မှန်ကန်သောအစိုးရအကူအညီအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားကူညီပေးပါမည်.
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဆင်းရဲသားတွေကိုမိသားစုများအတွက်ယာယီကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ဖက်ဒရယ်ငွေသားအကူအညီကိုလက်ခံရရှိနေတယ်ဆိုရင် (TANF) သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲလုံခြုံရေးဝင်ငွေခွန် (SSI), သငျသညျဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာငွေကူညီစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မဟုတ်. ဒါဟာသင်သာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာငွေကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်စေခံယူနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ် (RCA) ထိုကဲ့သို့သော TANF သို့မဟုတ် SSI အဖြစ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ငွေသားအကူအညီ, မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး.
All refugees receive medical care when they first arrive in the USA. ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူဆေးပညာဆိုင်ရာစိစစ်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်. သငျသညျအခြို့သောရောဂါများကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းရရှိရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး, သင့်မိသားစုအရွယ်အစား, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပြည်နယ်သင်၌နထေိုငျ, သငျသညျအစိုးရဆီကကွဲပြားခြားနားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်လျှောက်ထားကူညီပေးပါမည်.
ဒုက္ခသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (RMA) ဒုက္ခသည်များအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. သင် U.S ထဲသို့ဝင်ရက်စွဲကနေမှတက်မှရှစ်လကြာ RMA ခံနိုငျ. ဒုက္ခသည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦး asylee status ကိုနှင့်အတူ, သငျသညျခိုလှုံခွင့်အဆင့်အတန်းကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ရက်စွဲတစ်ခု, လူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များအဖြစ်ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးရုံးကလက်မှတ်သို့မဟုတ်ရက်စွဲတစ်ခု.
ဒုက္ခသည်လူမှုန်ဆောင်မှုများ (RSS ကို)
အဆိုပါဒုက္ခသည်လူမှုန်ဆောင်မှုများအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းဆိုက်ရောက်ပြီးနောက်ငါးနှစ်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးသည်. ဒုက္ခသည်လူမှုန်ဆောင်မှုများအလုပ်အကိုင်န်ဆောင်မှုများပါဝင်ပါသည်, အလုပ်အကိုင်အလေ့ကျင့်ရေး, ပညာရေးဆိုင်ရာန်ဆောင်မှု, ဒုတိယဘာသာစကားညွှန်ကြားချက်များနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကူအညီများအဖြစ်အင်္ဂလိပ်အပါအဝင်, ကိစ္စတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုများ, နှင့်အခြားအထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုများကို.
ဒုက္ခသည်လူမှုန်ဆောင်မှုများအတွက်နှစ်ခုကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်. ပဌမ, ဒါကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ RSS ကိုအတွက်အလုပ်အကိုင်အထူးကုသငျသညျသငျ့လျြောသောအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. အလုပ်အကိုင်အထူးကုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်-လစဉ်အခြေခံပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်အကိုင်အမှုပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူအဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကအလုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးကြမည်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အင်တာဗျူး, လာမည့်အင်တာဗျူးအဘို့အလေ့အကျင့်, နှင့်ပိုပြီး.
သင်သည်သင်၏မိသားစုကိုဂရုစိုက်နိုင်မှများအတွက် RSS ကိုအစီအစဉ်ကိုလည်းအမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်.
ဥပဒေရေးရာ setting တွင်ဘာသာပြန်များနှင့်စကားပြန်
ဥပဒေရေးရာ setting တွင်, သင်တစ်ဦးစကားပြန်နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုသူရှိသည်ဖို့တစ်ဦးအခွင့်အရေးရှိသည်. သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်စွာအင်္ဂလိပ်စပီကာများမှာမဟုတ်လျှင်, စကားပြန်သုံးစွဲဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဥပဒေရေးရာသတင်းအချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ပင်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘာသာစကားမှာ.
The ORR Persons အစီအစဉ်တွင် anti-ကူးသန်းရောင်း (ATIP) လူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များသတ်မှတ်နှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံခြားလူကုန်ကူးခံရသူကူညီဒုက္ခသည်များကဲ့သို့တူညီသောအတိုင်းအတာအထိအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်လာဖို့.
အဆိုပါ Voluntary Agencies Matching Grant Program works with the Refugee and Cuban Haitian Entrant Reception and Placement program.
The ORR Repatriation Program provides help to US citizens and their immediate family members who have returned to the USA after problems overseas, သို့မဟုတ်အရပ်ဘက်မငြိမ်မသက်သို့မဟုတ်ပြည်ပမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထဲကပြေးထွက်လုသောသူ.
Free translation services ကို
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ Office of Refugee Resettlement နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.